ညီရဲသစ်: ကြယ်အလင်းဖြင့် လင်းသည့်လမင်း
Posted by ညီရဲသစ် at 00:19
ချစ်စံအိမ်6February 2012 at 02:10
ဖြစ်တတ်ပါတယ် ကိုရဲရေ လောကမှအဲလို ဇာတ်လမ်းတွေ
အများကြီးပါ စာရေးကောင်းတော့ပိုဖတ်လို့ ကောင်းသွားတာပေါ့
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy!6February 2012 at 03:22
တစ်ကယ် လူနေမှု ဘဝ အစစ်ပါပဲအကို...
ဟုတ်တယ် ပညာတက်တိုင်း မသိတက်နိုင်သလို
လူဖြစ်တိုင်းလဲ သိတက်ဖို့ ...ခဲယဉ်းပါတယ်..
မဒမ်ကို6းFebruary 2012 at 09:43
ဟုတ်တယ် ကြယ်တွေဟာ လမင်းကြီးပနာရအောင် ၀ိုင်းရံပေးနေရသလိုဘဲ
တချို့ဘ၀တွေဟာလဲ တချို့တချိှု့သောဘ၀တွေအတွက် အနစ်နာခံစတေးပေးနေကြတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ဘ၀မှာ ရှိနေခဲ့တယ် ကိုရဲရေ ..
mstint6February 2012 at 10:38
မောင်ညီရဲရေ။ လိမ္မာတဲ့သားနှစ်ယောက် ဘဝမှာအခိုက်အတန့်
ခက်ခဲနေသည့်တိုင် မိဘအပေါ်သိတတ်တဲ့သားတွေမို့ အနာဂါတ်
Myat Pan Nwe (မြတ်ပန်းနွယ်)6February 2012 at 14:16
ပညာတတ်တိုင်း သိတတ်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို မြတ်လည်း ထောက်ခံတယ်။
တလက်စတည်း မြတ်ရဲ့ အယူအဆ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတန်းပညာတွေ၊ ဘွဲ့ထူးတွေ အများကြီး ရထားတိုင်းလည်း ပညာတတ်တယ်လို့ မယူဆတတ်ဘူး။ သိတတ်တာ၊ နားလည်မှုရှိတာ၊ ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်သူသာ ပညာတတ်သူလို့ မြတ်က ယူဆပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ချင်ပါတယ်။
san htun6February 2012 at 14:38
ပညာတတ်တိုင်းလည်း ဘဝအသိရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး..လမင်းကြီးကို ဝန်းရံပေးနေတဲ့ ကြယ်လေးတွေဘဝက သနားဖို့ ကောင်းတယ်..ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ညီရဲရေ
jasmine(တောင်ကြီး)6February 2012 at 15:54
ပညာတွေ အများကြီးတတ်ပြီး လောကအကြောင်းဘာမှမသိတဲ့သူကိုမြင်ခဲ့ဖူးတယ်
မိုးခါ6းFebruary 2012 at 17:31
မိဘနဲ့ မိသားစုဝင်တွေက ကိုယ့်အတွက် အနစ်နာခံ ပေးဆပ်ခဲ့တာက လိုချင်မှုတခုကြောင့်မဟုတ်ပေမယ့် ခုလိုအဖြစ်မျိုးတော့ မျှော်လင့်ကြမှာမဟုတ်ဘူး .. ပြောလို့လည်း မကောင်းတော့ ကာယကံရှင်က သိတတ်မှ ဖြစ်မှာ .. မျှော်မြင်တွေးခေါ်နိုင်ကြပါစေ
Anonymous7February 2012 at 10:36
This isanice post too. And, your writing is also better and better post by post. Keep trying!!!! :)
Your Myayy Layy
ပျိုးယုဝသုန်7February 2012 at 14:20
ဒီလိုအဖြစ်တွေ..နာလည်မှုမရှိတာတွေအများကြီးပဲ .. ပညာတတ်လာလေ..ကိုယ့်အတွက်ကို်ယ်ပိုပြီးကြည့်တတ်လာလေလေပါပဲ.. ထမ်းတင်ပေးရတဲ့ပခုံးတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်..
မြသွေးနီ7February 2012 at 18:34
မိသားစုအတွက် အနစ်နာခံရတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ရှိတယ်။ မသိနားမလည်တတ်သူများဆိုပေမယ့် ရှဉ့်လဲ လျှောက်သာ ပျားလဲစွဲသာ ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုဘ၀လေး ဟန်ချက်ညီညီတည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။ နှစ်သက်စရာ ပို့စ်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
အလင်းသစ်7February 2012 at 22:03
ကြယ်အလင်းဖြင့် လင်းသည့်လမင်းတဲ့ ..ခေါင်းစဉ်ပေးပုံလေး ကြိုက်တယ်ဗျာ..။။။
Candy 8 February 2012 at 01:34
အစ်ကို့အတွေးလေးလည်း ကောင်းတယ် :D
...အလင်းစက်များ 8 February 2012 at 18:07
တစ်ခု မက အများကြီး ရလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရွံရှာနေတာ ကြာပြီ။ ကျေးကျေး ညီရဲ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)9February 2012 at 00:10
ပေးချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေး ကောင်းလိုက်တာ။
ဝတ္ထုဆိုပေမဲ့လို့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လို့ ခံစားမိတယ်။
ဟုတ်တယ်နော် မရှိတာထက် မသိတာခက်တယ်ဆိုတာ..
ကိုယ့်ကိုယ်ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ မိသားစုကိုတော့ ပြန်ငဲ့ကြည့်သင့်တာပေါ့နော်။
blackroze9February 2012 at 02:35